Ikhosi yeMicrostation-Funda uyilo lweCAD-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi yeMicrostation -Funda uyilo lweCAD
Microstation-Funda uyilo lweCAD
Ukuba ufuna ukufunda ukusebenzisa iMicrostation kulawulo lwedatha yeCAD, le khosi yeyakho. Kule khosi, siza kufunda iziseko zeMicrostation. Kwizifundo ezingama-27 zizonke, umsebenzisi uya kuba nakho ukuqonda ngokupheleleyo zonke iziseko. Nje ukuba izifundo zethiyori zigqitywe, iya kuqhubeka nokuzilolonga kali-15 nganye nganye eya kuthi ikhokelele kwiprojekthi yokugqibela. Le projekthi yakhelwe ukuba umfundi ayigqibe kuzo zonke iinkalo; Nangona kunjalo, izifundo ezili-10 zongezwa emva kokuzilolonga xa umfundi efuna ukugqibezela iprojekthi ngoncedo lwezi zifundo.
Ukuzoba inqwelomoya usebenzisa amanqanaba
Ubukhulu kunye noyilo lokuprinta
Umsebenzi wokwenyani uyilo loyilo
Inkqubo eyahlukileyo. Eyilwe ngokuchanekileyo kunye nemiyalelo kunye nokuzilolonga kwikhosi ye-AutoCAD ethengiswa kakhulu.
iinjineli, abayili kunye nabafundi
Abafundi be-AutoCAD abafuna ukuqonda iMicrostation
Abasebenzisi beBentley Systems
Bentley Systems Iikhosi zeMicrostation